Bentley ukubonisa iMicrostation eAthene V8i-Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/I-Bentley iya kuhambisa i-Microstation Athens V8i
I-Bentley iya kuhambisa i-Microstation Athens V8i
Kulindelwe, ndiyathemba ukuba, abantu abaninzi balindele, ukuba inguqulelo ye-8i eyaziwa njenge-8 Atena iya kuziswa ngokusesikweni, apho kufanele ukuba u-Porto wayeliguqula ulindelo lakhe ukusukela kumzamo wakhe ongaphumeleliyo kwinguqulelo ye-Mozart ukusukela kusungulwa i-V2004 ngo-XNUMX.
Oku kuyakwenzeka ngeziganeko ezibini ngosuku olunye: yonke imva kwemini kaPhilly kunye nosuku olunye nkomfa ye nkampani NgeNtlanganiso ePhilayo kunye nokufikelela kwi-brodcast yehlabathi ukuya kutsho kwimizuzu engama-90.
Imfihlakalo yonke efihlwe emva kwesibhengezo esimnyama, esifana noko uKeith andibonisa yona kwinguqulo "yijonge kum kwaye ungandichukumisi", apho iToronto yayiku-3D, ngelo xesha "yayinomdla" kodwa inkumbulo yelaptop yawa njenge ukuba babenike nge-viagra ezingaphezu kwe-50 mg ... hehe
NgoLwesine, Novemba 6, 2008 ngo-9: 30 kusasa nge-EDT. Ngelixa umsitho weFiladelfia uzakuqala ngo-1: 30 ukuya ku-6: 15 ngokuhlwa.
Isitshixo seWindows ukuze sibe ngummeli
Ngokoluvo lwam, ukusuka kwi-V8 ukuya e-Athene kuya kukhomba kwezi zinto zilandelayo:
3D ... kuthetha ukuba, nangona inomgangatho ophakamileyo wokuhanjiswa kunye nesantya ... baya kudibanisa i-DirectX 9c kunye ne-Vula i-GL, kunokwenzeka ukuba iya kudibanisa ngakumbi ne-Sketchup !, iGoogle Earth kunye neenkonzo ngemigangatho ye-OGC ... hooray! IArcServer.
IXML ... ukumiliselwa kwe-XFM (Extensible Format Modeling) yokutshaya esele ibonwe ukuza kuthi ga ngoku kwiMephu ye-Bentley, kuya kuthetha unxibelelwano olungcono kulwazi kunye nokudityaniswa kunye neProjeke Wise ngendlela encinci yokuhlala emqolombeni. Kwintsimi ye-geospatial, uphuculo kwiziphumo zoMshicileli we-Geo Web nangona nangona ngoku ifunda iifayile zefomathi, ... iDPR yayo isacaphukisa
DWG ... IAthene kufuneka ifunde kwaye ibhale malunga ne-dwg, esele yenziwe yi-V8 ngaphandle kokuyijonga njengefomathi yangaphandle.
Ukubhalisa kwinkomfa ye-intanethi yiyo linxibelelwano:
Banike iinombolo zeminxeba yasimahla yamazwe aphesheya kule nkomfa, kuquka neyaseSpain: 900987034, Mexico: 0-018664037413, Argentina: 08006661537.
Apho ndiza kukuxelela kwiveki ezayo, nangona olu phulo lubanzi, ngokuqinisekileyo siza kubona iziphumo zekhonkrithi kwinkomfa yonyaka olandelayo ngoMeyi ... kwaye ukuba abo basifundayo ngokuqinisekileyo esi sithuba bayasivumela ... sizakubonana kwakhona.
Ekugqibeleni baye baphatha igama elithi V8i, elisikhumbuza ngeV7j kodwa sele sibone ezinye iimbono.
Bentley Systems Dwg Umhlaba ka-Google GIS asibonise